Izulu nguBryan Adams - Izinto Zobugcisa
Izulu nguBryan Adams
Ngo dliwanondlebe kaDisemba 2003, umqambi uJim Vallance wathi wabhala le ngoma kunye no-lyricist uBryan Adams 'kwifilimu eyoyikisayo ebizwa Ubusuku Ezulwini , malunga nomphangi oyindoda, owakhululwa ngo-1983. ' Ifilimu inokuba kwinqanaba lesithathu kodwa ingoma yayiyeyona monster hit. Ekuqaleni i-ballad yamandla, ngo-2002 yabhalwa ngu-DJ Sammy, uguqulelo lwakhe laya kwi # 1 e-UK nase # 8 e-US.
Ngo-2002, u-DJ Sammy wabhala ingxelo yakhe kunye nomvelisi waseJamani u-Yanou kunye ne-vocalist yase-Dutch. Uyakhumbula uYanou I-1000 UK # 1 Ukubetha NguJon Kutner noSpencer Leigh: Isizathu sokuba ndikhethe 'izulu' kungenxa yokuba ndiyayithanda kwaye inenkumbulo ekhethekileyo ukususela ebutsheni bam. Ndicele u-Do ukuba acule kwingoma ye-trance avumile kuyo, kodwa naye wanyanzelisa ukuba kurekhodwe uhlobo olucothayo oluyinyani kuleyo yoqobo.
Xa ii-Songfacts zabuza u-Adams ukuba uziva njani ngengoma ka-DJ Sammy yale ngoma, waphendula wathi: 'Wonke umntu uyayithanda le ngoma, kwaye bendonwabile ngumdaniso oveliswe nguYanou. Kuhlala kunomdla ukuva indlela abanye abantu abawutolika ngayo umculo wakho, ngamanye amaxesha, njengale nguqulo, bayadibana.
U-DJ Sammy remix wayeyintandokazi kaJessie Gilbert, owayeneminyaka eli-11 waphumelela i-Women's World Amateur Chess Championship. UJessie wasweleka kwiimeko ezibi ngoJulayi 2006 eneminyaka eyi-19 kuphela; Ingoma yadlalwa kwinkonzo yomngcwabo wakhe eCaweni iSt.Mark, eReigate, kwinyanga elandelayo.
Alexander Baron - London, eNgilani
Iinguqulelo ezimbini zevidiyo zenziwe. Eyokuqala, ekhutshwe ngo-Novemba ngo-1984, yayikhokelwa nguSteve Barron, owayesebenza kwiividiyo ezininzi zeAdams zelo xesha. Lo ubonise uAdams emi eqongeni phakathi kweeseti zikamabonwakude ezibonisa iinxalenye zamalungu ebhendi yakhe. Ukudutyulwa kwesihlwele kutyhila ukuba izihlalo azizaliswanga ngabantu, kodwa ziiseti zeTV, ezenza iAdams ibe kuphela komntu kweso sakhiwo.
Ividiyo yesibini yakhutshwa ngo-Matshi 1985 kwaye inombono ofikeleleke ngakumbi. Kule, umfana uyatsalwa ngenxa yokuqhuba enxilile esitratweni ukusuka kwikonsathi kaBryan Adams. Intombazana awayeyiqhuba ngemijelo kwaye iya kumdlalo, apho yena no-Adams benza unxibelelwano. Le nguqulo yesibini yonyulelwa iMbasa yeVidiyo yoMculo ye-MTV kudidi lweCinematografi.
U-elvis costello uxolo, uthando kunye nokuqonda
kukho igumbi apho ukukhanya kungakufumani amazwi
uncedo oluncinci oluvela kubahlobo bam
hey mickey ulungile lyrics
hamba ecaleni lasendle intsingiselo
yintoni ingoma ymca malunga